đi Mavic Air ကို 4K မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏စျေးနှုန်း ...
အစရေဒီယို-controlled device များRC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်đi Mavic Air ကို 4K မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
đi Mavic Air ကို 4K မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ဇူလိုင်လ 2019 15 11: 57
နှုန်းထားများđiသမိုင်း Mavic Air ကို 4K 3-ဝင်ရိုးတန်းကင်မရာ Gimbal 32MP Sphere မြင်ကွင်းကျယ် SmartCapture foldable မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် RC RTF - အာတိတ်ဖြူ
€ 692,26 - 2019 27 ဇွန်လ
€ 665,60 - 2019 မေလ 21
€ 656,71 - 2019 မေလ 16
€ 674,49 - 2019 28 ဧပြီလ
€ 638,94 - 2019 27 ဧပြီလ
€ 647,83 - 2019 19 ဧပြီလ
€ 656,71 - 2019 17 ဧပြီလ
€ 654,94 - 2019 16 ဧပြီလ
မှ: သြဂုတ်လ 2018 28
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 692,26 - 2019 27 ဇွန်လ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 621,17 - 2018 24 နိုဝင်ဘာလ
đi Mavic Air ကို 4K ကင်မရာ 3-ဝင်ရိုးတန်း Gimbal 32MP Sphere မြင်ကွင်းကျယ် SmartCapture foldable RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် RTF -...
Mavic Air ကိုđi RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် 32MP လုံးသောမြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံ
đi Mavic Air ကို 12MP 4K3FPV-ဝင်ရိုးတန်း Gimbal အတားအဆီးရှောင်ရှားမြင်ကွင်းကျယ် foldable RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Quadcopter
4-ဝင်ရိုးတန်း Gimbal 3K ကင်မရာ 4MP Sphere မြင်ကွင်းကျယ် RC foldable မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Quadcopter / w đi Mavic Air ကို 32KM FPV
မော်ဒယ်အမည်: Mavic Air လေကြောင်းလိုင်း
အဆိုပါအကြံပြုပျံသန်း Atsumi: 4km
đi - Air ကို Mavic - Mavic သည့် Air ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း
đi MAVIC AIR! အဆိုပါ MAVIC PRO ထက် သာ. ကောင်း၏?!
Mavic AIR အသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ Mavic Pro ကို
đi Mavic Air ကိုနှိုင်းယှဉ်!
đi MAVIC AIR လုပ်ဆောင်ခြင်း!
đi Mavic Air ကို 4K မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဗီဒီယိုများ
€ 779,00 - 2019 27 ဇွန်လ
€ 749,00 - 2019 မေလ 21
€ 739,00 - 2019 မေလ 16
€ 759,00 - 2019 28 ဧပြီလ
€ 719,00 - 2019 27 ဧပြီလ
€ 729,00 - 2019 19 ဧပြီလ
€ 739,00 - 2019 17 ဧပြီလ
€ 737,00 - 2019 16 ဧပြီလ
အဘို့အ 320 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း đi Mavic Air ကို 4K မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
KRMYKSL - ဇွန်လ 2019 11
စံပြ wifi batarya alabilirsiniz bi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Bence မီးပွား yerine bunu, mesafe açısından en ့မွေးဖွားခြင်း daha temiz ၏çok3eksnili bi အခန်းထဲကVideolarıçekebilirsinizကဗီဒီယို olarak ekliyorum Ordan izleyebilirsiniz Bende အဘိဓါန်2Tane oldu daha öncesindedeအမည် tavsiye ederim DHL ile7Gundy ဧလိမ်အရပ် Ulas Ama TR3Gundy gelmişti 12ile-ile gümrükuğraştım Tabi çalıştığımdandfolayı uzun Šurda Yoks bi KAC ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI var sonra zaten gümrükÜRÜNhakkını veriyor bir iPhone ကို 8 ပေါင်း Kadar var Ama စီးဆင်းမှု batarya yetmiyor büyüklüğü့ saatlik
ÖNDER - ဇွန်လ 2019 11
bir မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Aird Xiaomi က 4k kullanıcısıydımtaşımasıbüyüklüğü benim içinçokfazlaydı MAVIC Irishman့tercih sebebim küçüklüğükullanımkolaylığıတစ်ချိန်ကMükemmelstabilliği oldu ့။ Gerçektençok menunum gerek stabilliği gerekse kaliteli görüntüçekimi kesinlikle fark ediyor ucus süresine gelecek olursakta 16 DC gibi bir သေချာတာပေါ့ veriyor tabiki Bu Kis ki ayındaသေချာတာပေါ့yazın2DC Civar Artis gösterecektir။ Almayate düşünen herkese öneririm gearbest ayrıcalığı ile bir Baskin နှလုံး။
Berkay - ဇွန်လ 2019 11
အရှည် FCC သည်ကိုသင်တို့သည်geçirmekiçin mevcut alakanıziçinçokTeşekkür ederim ÜRÜN kesinlikle combo versiyon alınSonradan pil bulma derdini taşıma Cantao derdini ortadan kaldırırsınızPilSüresi 21dk desede 17-18dk civarlarında hava kalıyorFcc mode ကိုkullanırsanız 4km ce modda 2km yani TR က de 2km Ama bir çokကဗီဒီယိုပါ။ URUN MALZEME kalitesi gerçekten iyiKutu ICER güzeltürkçekullanım klavuzu internette mevcut
Maurizio - ဇွန်လ 2019 11
đi MAVIC AIR, certezza di la avere နှုန်း You Tube မှ nome una garanzia, basta guardar qualche ကဗီဒီယို un UNO dei မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် acquistato အဆိုပါအာရုံခံကိရိယာတစ်ခု livello AMATORIALI piùဆန်းသစ် sul mercato, il ritorno alla အခြေစိုက်စခန်း di partenza နှုန်း lo stazionamento အီးနှုန်း il GPS, aver ဆန့်ကျင်တိုက်မှု presen che SIA sull'anteriore sul, FANNO UNO dei più sicure della sua fascia မှာအီး anche နဲလ် corpo ယုတ်ညံ့ posterior particolare di merito ဟက်တာ il comando အီး le ဓာတ်ပုံယိုယွင်း panoramiche တစ် tutto Tondo သတိပြုပါ။
Bruno - ဇွန်လ 2019 11
dou5Estrelas envio porque foi pela DHL Rapid ။ promoçãoespetáculo Que consegui ။ agradeço imenso Terem colocado နှင့် adaptador က de Energia က de မသန်စွမ်း CN europeon Uma vez Que ဏ compres combo CN ။ (အိတ် BARATO) Veio tudo direito အီး။ Funcionario EA ။ က VOOS Phys3။ inícui assustei ငါ့ကို JEITA ၏ဏ Que Nao controlador encaixava အစုလိုက်အပြုံလိုက်ခေတ်ဒီတော့ falta Minh က Ao ။ tudo certo ။ continuem ASSIM 😉
ကင်မရာနှင့်အတူ Syma X5C မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
3 198,26 €
TRONXY X5SA ဂိုဒေါင် DE / ru / အမေရိကန်
Xiaomi က Mi Band4စမတ်လက်ကောက် NFC ကိုဗားရှင်း - က Black
Fimi X8 အရှေ့တောင် 5KM FPV 3-ဝင်ရိုး Gimbal 4K GPS စနစ် RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် (Xiaomi ကဂေဟစနစ်ကုန်ပစ္စည်း) - အဖြူရောင်
Creality CR - မက်စ် 10 450 450 က x x ကို 470mm 3D ပရင်တာ - က Black အီးယူ Plug
VIVIBRIGHT F30UP LCD ကို Projector မူလစာမျက်နှာ Entertainment ကကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် - အန်းဒရွိုက်စနစ်နှင့်အတူအနက်ရောင်အီးယူ Plug
7 8 + 256GB OnePlus
SONICMODELL Binary 1200mm EPO ရှည် RC လေယာဉ်ပျံ PNP - အဖြူရောင်